Dzimwe nguva, inowanzo kuve yakapusa kuita mabasa anokonzeresa vanogadzira webhu misoro mikuru. Imwe yeiyo iri nyore Wedzera kuKarenda bhatani iwe raunowana pane akawanda masayiti anoshanda pane akakosha khalenda zvirongwa online uye kuburikidza nedesktop application.
WedzeraEvent ibasa diki rakakura rinoburitsa kodhi inodikanwa uye mafaera ekuwedzera kana kunyorera kuApple Calendars, online Google makarenda, Outlook, Outlook.com, uye online Yahoo! makarenda. AddEvent inopa zvese zvishandiso zvepamhepo pamwe neAPI yekugadzirisa yako Wedzera kuKarenda zvinongedzo uye mabhatani iwe zvaungade.
Kunyoresa Karenda (zviitiko zvakati wandei) - zvinowedzera zvirinyore zviitiko kune ako mushandisi makarenda nekunyorera kune khalendari yaunogadzira. Unogona kuita shanduko pakarenda yako, uye shanduko iyoyo inozoonekwa pane ako ese makarenda evanyoreri.
Events (yezvinyorwa uye kugovana munharaunda) - gonesa vashandisi kuwedzera zviitiko zvako kumatarenda avo zvisinei nekwavanodzidza nezvazvo - angave matsamba enhau, enhau senge Facebook kana Twitter, kana maturusi ekushambadzira saMailChimp, Marketo, kana Salesforce. WedzeraEvent's chiitiko chishandiso chinoita kuti chikurumidze uye chisarwadze iwe kuti ugadzire chiitiko chine peji rayo rekumhara iro iwe raunogona kugovana pasocial media, kana kushandisa sechibatanidza mumatsamba enhau uye mushandirapamwe maturusi.
Yakananga URL Nzira (uye maAPI's) - chinongedzo chinogoneka chinogona kushandiswa kugadzira chiitiko pane-kubhururuka, kana kutumira vashandisi vako kusevhisi yavo yekendari kwavanogona kuwedzera chiitiko chako, kana kutobatanidza chiitiko chako kuemail yaunotumira kune vashandisi vako. .
Iyo yakasimba, yakapusa, uye inobatsira diki chikuva iyo inonyatso batsira vako vanyoresa uye vebhizinesi shamwari. Kunyangwe iwe uri kuvaka chikuva uye unoda kuwedzera-kune-kalendari mashandiro kana kana uchingova bhizinesi rekugovera chiitiko chiyeuchidzo kune wese munhu, AddEvent ipuratifomu yakanaka. Vanopawo:
Analytics - Tevedzera kufumurwa, chiitiko-chinowedzera, vanyoreri vekarenda uye nezvimwe. Analytics inopa data rakakosha nezve yako makarenda uye zviitiko yakagadzirwa kuburikidza neDashboard kana iyo Karenda & Zviitiko API.
Tags: wedzera kukerendaWedzera kukarenda chinongedzowedzerakarenda yeapurocalendar APIkarenda kunyoresakarenda Xembeddable kalendarichiitiko chinomhara pejichiitiko chinongedzogoogle kalendarimailchimpmarketomaonero khalendarioutlook.com kalendarisalesforcekunyoresa karendayahoo kalendari